Microsoft inogona kunge iri iyo hombe kuvhurwa sosi inopa | Linux Vakapindwa muropa
Microsoft inogona kunge iri huru yakavhurika sosi shamwari
Kana zvasvika pakuvhura sosi nekubatana kweizvi, pamwe vazhinji vanogona kuuya kumakambani epfungwa senge Intel, Red Hat kana pamwe Google, asi zvingave zvisinganzwisisike kufunga nezveMicrosoft.
Uye kana kunyangwe vamwe vevaverengi vedu zvingaite senge zvisina musoro kurondedzera Microsoft kune nyika yakavhurwa sosi, izvi ndezvechokwadi uye kwemakore akati wandei izvozvi Microsoft iri zvakare mumwe weakakosha vanopa.
Asi kufunga kuti Microsoft ndiyo huru yakavhurwa sosi inopa yenyika, zvinganzwika sezvisina musoro.
Asi isu takakanganisa kana zvirinani, sekuyerwa nenhamba yevashandi vanoshingairira kupa kuvhura sosi mapurojekiti paGitHub zvinodaro neimwe nzira.
Chaizvoizvo Microsoft ine vaviri vanopa zvakapetwa zvakapetwa seyechipiri mupiro mukuru, Google.
Nekudaro, ongororo ichangoburwa yevagadziri vemagetsi emagetsi vakawana kuti Google, Microsoft haina hushamwari zvakapetwa kaviri kuvhura sosi.
Google inopa kukuru kuvhura sosi uye yave yemakore.
Kubva kuGoogle Zhizha reKodhi kune zvipo zvake kuMySQL uye akati wandei mapurojekiti, ayo Google yaakapa.
Munguva pfupi yapfuura, akawedzera kutora kwake chikamu zvakanyanya nemipiro kuKubernetes chirongwa uye TensonFlow, imwe neimwe yavo ichipa kukosha kwakakura kune huwandu hwakawanda hwehuwandu hwevagadziri.
Chakatonyanya kushamisa ndechekuti Google yakachengeta mapurojekiti aya nenzira yekuti ikave yechokwadi nharaunda kuedza.
Hazvishamisi kuti, 53% yevanopfuura vanogadzira 4300 vakaongororwa vanotenda kuti Google "inogamuchira yakavhurika sosi yakawanda."
Microsoft, pachikamu chayo, yakawana isingasviki hafu yemavhoti, iine 23%. Facebook yaive ne10% uye Amazon 4%, uye pakupedzisira Apple 1%.
1 Pfungwa dzekare dzinofa
1.1 Izvo zvichiri pamutemo kuvenga Microsoft.
Pfungwa dzekare dzinofa
Nekudaro, Microsoft yakapawo yakavhurwa sosi.
Zvinogona kuve nyore kufunga kuti vanogadzira havazive nezve eprojekti yakavhurwa enzvimbo yeMicrosoft, asi sekutaura kwaBrian Rinaldi, chikamu chikuru chevagadziri vanogara pane Microsoft Visual Studio kodhi
Zvakanaka, vamwe vakaratidza kuti rudo rweMicrosoft rutsva rwe open source rwunozvishandira. Injiniya Jeff Schroeder, semuenzaniso, akati:
Microsoft ine vanogadzira vanogadzira vanopa ruzivo rwavo kuenderera mberi nekusimudzira kuLinux Kernel.
Asi kunyanya mupiro wake wakagadzirirwa chete Hyper-V, izvo zvinoita kuti Linux irambe zvakanaka paAzure.
Mazhinji emipiro yavo anobva kuAmazon, ayo anoguma asingaunze hunyoro hwakawanda seTensorFlow kana Kubernetes.
Izvi zvinogona kunge zviri zvechokwadi kunyangwe hazvo munhu wese anobatsira kune yako yakavhurika sosi kodhi kodhi akangofanana noudyire.
Kune chikamu chayo zvakare Google haisi kupa Kubernetes sechipo chakareruka, sezvo paine chinangwa cheicho.
Iko kufunga kunosiya Microsoft muvengi wezvinhu zvese yakavhurwa sosi, Steven Vaughan-Nichols akadaro.
Izvo zvichiri pamutemo kuvenga Microsoft.
Anenge bheji rekukudzwa. Ini ndakanyora mhinduro kuna Quora nezve kubudirira kweLinux nekuda kwezvikonzero zvebhizinesi uye zvinounza makomendi akatsamwa kwazvo. "Mathew Lodge akataura.
Kunyangwe makore ekuzvibata kwakanaka, nemamwe mazwi, vagadziri vari kunamatira kune yechinyakare vhezheni yeMicrosoft.
Izvi zvichanyatso kuvandudzika nekufamba kwenguva, asi ikozvino, Microsoft iri kushanda kaviri zvakaoma kuti iwane mukurumbira wayo pamwe nevagadziri.
Nhau dzakanaka ndedzekuti kambani inoita senge yakazvipira zvizere kuita izvozvo kwenguva yainotora.
Iwe uri kubheja ramangwana rako sekambani yeplatform kuti uchinje iwo mafungiro ekuvandudza.
Uye hazvishamise nekuti zvirinani kusvika gore rino Microsoft yakaita bheji rakakura nekushandura vavariro dzayo kubva pakuona Linux nekusimudzira kwayo semuvengi kuti zvirinani kuitora semubatsiri.
Zvakanaka, sekushandira pamwe naye mazuva mashoma apfuura, Microsoft, yakatarisana neiyi bheji, yakaumba iwo masosi eakavhurika sosi mushure mekujoinha iyo Open Source Initiative uye iyo Linux Foundation.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Microsoft inogona kunge iri huru yakavhurika sosi shamwari
Mashandisiro ekutsvaga Kutsvaga kuti uwane nekukurumidza mafaera muLinux?
FreeOffice 6.1.3 inosvika ichigadzirisa zvikanganiso makumi matanhatu nezvitanhatu